The Best Cities In Eoropa Fa Tsy mpihinan-kena | Save A Train
Home > Travel Europe > The Best Cities In Eoropa Fa Tsy mpihinan-kena
The Best Cities In Eoropa Fa Tsy mpihinan-kena
Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Spain, Fiaran-dalamby any Soeda, Train Travel UK, Travel Europe
Ny lisitry ny tanàna tsara indrindra any Eoropa ho an'ny Tsy mpihinan-kena dia Manomboka mahazo intsony nony farany. Mety ho mora kely izay hanombohana izany fa ny zavamaniry scene is finally taking off. Fantatsika rehetra fa hena-centric sakafo hanapaka ny karazan-tsakafo amin'ny firenena Eoropeana maro. Fa ny zavatra efa niova. Tato ho ato, tsy maintsy mandeha ianao raha noana ny mpitety kena. Ary tsy tsy maintsy cater manokana ho anao.
Ireto ny sasany amin'ireo Ny tanàna tsara indrindra any Eoropa ho an'ny Tsy mpihinan-kena sy ny fomba ahatongavana any lamasinina.
Tanàna tsara indrindra any Eoropa ho an'ny Tsy mpihinan-kena: Berlin, Alemaina
ny marina, mandeha hena-maimaim-poana ny sasany amin'ireo manana fitiavan-tanindrazana bebe kokoa restauranteers swoling amin'ny eritreritra, afa-tsy ny trano fisakafoanana izay efa nandray azy, isika, ka ny satroka ho any aminao! Berlin izao manatitra mampino nahay ny trano fisakafoanana vezetarianina. Isika dia miresaka Vegan gilasy ny mahavariana Veggie burgers. Vezetarianina indrindra indrindra any Berlin dia avo kalitao ary koa ny Super falehan'ny olona. Berlin mihitsy aza atao hoe The New Vegetarian Renivohitra tontolo izao amin'ny alalan'ny SaveuR in 2015. Ary na dia ny nentin-drazana indrindra toeram-pisakafoanana, misy safidy tsara ho an'ny mpihinana ny Veggie eo anivontsika.
Tanàna tsara indrindra any Eoropa ho an'ny Tsy mpihinan-kena: Barcelona, Espaina
Tsy tena tia Sain sy ny fomba efa nandray Vegan tsy mihinan-kena sy sakafo! Barcelona, manokana, Tena dodona ny ho fiarahabana, dia nilazalaza tena 'veg-namana, ny sakaizan'ny Vegan kolontsaina sy zavamaniry 'ao March 2017. City Hall mihitsy aza namoaka ny azy zavamaniry mpitari-dalana tany an-tanàna, ary dia namporisika ny mponina mba hanandrana avy hena-maimaim-poana Alatsinainy. Toy ny ankamaroan'ny toerana, ianao hahita fifangaroan-tsotra namana veg-toerana sy ny toeram-pisakafoanana Vegan fotsiny toy ny BioBento ary ny atao hoe araka ny tokony ho- Veggie Garden. Cake mpitia? Avy eo dia mila mitsidika Santoni Cafe, izay manompo Vegan ny pizza, Vegan muffins, ary Vegan croissants, amin'ny hafa matsiro treats.
Tanàna tsara indrindra any Eoropa ho an'ny Tsy mpihinan-kena: Stockholm, Soeda
Raha tadiavinao fisakafoana tsara zavamaniry-saran-dalana dia mijery intsony noho ny Stockholm. This popular Scandinavian city definitely makes our list for Ny tanàna tsara indrindra any Eoropa ho an'ny Tsy mpihinan-kena. Izany ihany koa ny faran'izay mora ny mahazo ny lamasinina! Zavamaniry iray ny tsy hanapaka toeram-pisakafoanana: Maro no mihevitra Hermans (www.hermans.se) no tsara indrindra zavamaniry trano fisakafoanana any Eoropa. Izy ireo manatitra rehetra-anao-afaka-mihinana zavamaniry buffet amin'ny tsy mampino jerena an-tanàna.
Tanàna tsara indrindra any Eoropa ho an'ny Tsy mpihinan-kena: London, England
gaga? Izahay tsy mihevitra toy izany! London tena manana rehetra! Anisan'izany ny habetsahan'ny Vegan mahatalanjona safidy. Soho mirehareha ny firenena rehetra, voalohany-veg Pub - The Coach & soavaly dia ny London (ary angamba Angletera) malaza indrindra zavamaniry trano fisakafoanana. Manolotra Vegan sy ny Veggie slants amin'ny British Pub Classics. Raha toa ianao mahatsiaro ho sahisahy dia Vanilla Black no toerana tokony ho! Tsy fahazoan-dalana ny iced zavokà miaraka amin'ny oliva sy ny Jerosalema Crumb artichoke mofomamy amin'ny Brezila bazana dronono sy laisoa. Toa naka fanahy ny olona, Tsy mpihinan-kena.
Tanàna tsara indrindra any Eoropa ho an'ny Tsy mpihinan-kena: Glasgow, Scotland
Glasgow – Tsy maninona fotsiny zavamaniry, fa ny iray ao amin'ny firenena Vegan-namana ny ankamaroan'ny tanàn-dehibe, ary tsy mitsaha-mitombo ny zavatra rehetra fialofana ho an'ny zavamaniry.
Dia toa tahaka ny misy vaovao na Vegan Veggie hidirana fanokafana efa ho isan-kerinandro, ary ny fangatahana fa tena misy. Time aorian'ny fotoana izany dia efa nifidy ny tena namana Vegan-toerana ao amin'ny UK. VegFest (Eoropa lehibe indrindra Vegan fety) Nanampy ihany koa Glasgow ho any amin'ny lisitra.
Tsy Efa misy fotoana tsara kokoa noho ny ankehitriny ny boky iray mitaingina ny fiaran-dalamby na aiza na aiza any Eoropa miaraka amin'ny SaveaTrain raha ianao zavamaniry na Vegan!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcities-europe-vegetarians%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#healthyFood #Travelhealthy #Vegan #Vegetarian Food Tendan-kanina longtrainjourneys fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel